I-Printer Eva Foam Enhle kakhulu China Manufacturer
Incazelo:I-Eva Foam Printer Thenga,Umshayeli wephrinta we-Eva Foam,Amashayeli wephrinta e-Eva Foam
Home > Imikhiqizo > Iphrinta ye-UV > Iphrinta ye-Foam Foam > I-Printer Eva Foam Enhle kakhulu
I-Printer Eva Foam Enhle kakhulu
Sinobuchwepheshe ekukhiqizeni futhi sinikeza ububanzi obubanzi be- A3 UV Printer eklanyelwe ukusebenzisa amaphethini amaningi ahlukahlukene kumbala kuzo zonke izinto. Ngaphansi kokuqapha okuqinile kwezifundiswa zethu ezihlakaniphile, umshini wokunyathelisa owenziwe unikezwa kahle usebenzisa izingxenye zekhwalithi ye-premium nobuchwepheshe obuqhubekayo. Ngenxa yokwakhiwa kwayo okunamandla nokusebenza okulula, umshini wethu wokunyathelisa ohlinzekiwe kabanzi udinga inani elikhulu lamakhasimende.
I-Eva Foam Printer Best Buy uhlobo lwe-"non-contact" lwama-jet uhlobo lwemishini ye-digital, i-Eva Foam Printer Buy uhlelo lokusebenza lukhulu kakhulu. Ukusebenzisa amadivayisi asekela i-UV inkinobho, ngaphezu kwendwangu ayikwazi ukuphrinta, cishe zonke ezinye izinto (ikhava yefoni, isikhumba, izimpawu, amabhokisi amancane, ukunikezwa kwamandla weselula, i-flash memory disk, ibhodi le-KT, itshe, i-gel silika, izinkuni, i-ceramic, i-crystal, i-acrylic, i-PVC, i-ABS njll.) impahla ingaba umshini wokunyathelisa umbala, uqedile ngokumelana nokumelana, ukumelana nokugqoka, ukumelana nokushayeka. Ukuze uzuze umqondo weqiniso we-seal, akukho ipuleti, u-spray owomile, isithombe esiphelele sombala.
Izici eziwusizo ze- Eva Foam Printer Driver yethu RF-A3UV:
2. I- Eva Foam Printer Cartridge ingafakwa nge-Height Detecting sensor, ukuvikela ikhanda lokuphrinta;
3. Amashayeli we-Eva Foam Amaphrinta I-cartridge ineNenzwa yokuThola iNgeli yeNkinobho, uma inkinobho iphelile kuyobe ivusa;
I-UV Digital Printer i-Eva Foam iphrinta Xhumana Nanje
I-Eva Foam Printer Thenga Umshayeli wephrinta we-Eva Foam Amashayeli wephrinta e-Eva Foam I-Foam Printer Thenga I-Eva Foam Printer Ink I-Eva Foam Printer XP I-Eva Foam Printer Paper I-Eva Foam Printer Online